Nagarik News - 'मौन' नम्रता
बिहीबार ६ असार, २०७०
मन लागेका कुरा चाहेर पनि अभिव्यक्त गर्न नसक्नु कति पीडादायी हुन्छ होला? त्यसमाथि प्रेमका कुरा गर्नु त झन् कठिन! त्यसको अनुभव बटुलेकी छिन्, अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले। चुपचाप सुटिङ सकाएको फिल्म 'मौन'बारे पहिलोपल्ट शुक्रवार मुख खोलेकी छिन्।
बोल्न नसक्ने विद्यार्थीहरूस“ग सत्ताइसौँ जन्मदिवस मनाउँदै 'मौन' बारे जानकारी दिएकी छिन््। नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयमा जन्मदिवस मनाइरहँदा उनले अर्काे कुरा खोलिन्। त्यो थियो उनी त्यही विद्यालयको छात्रा भएको कुरा! फिल्मका लागि उनले सांकेतिक भाषा त्यहीँ सिकेकी रहिछन्। विद्यार्थीलाई स्टेसनरी पनि बाँडेकी उनले 'फिल्मको कथावस्तु पनि सुन्न र बोल्न नसक्नेहरूको प्रेममा आधारित' रहेको बताइन्। 'मौन'लाई सुरज भुसालले निर्देशन गरेका हुन्।
उनीहरूलाई लोक बाबा, गुरु, महाराजजी आदि भनेर सम्मान गर्छ, श्रद्धा गर्छ, पूजा गर्छ। दुःखकष्ट र रोगव्याधिबाट छुटकारा दिलाइमाग्न मान्छेहरू उनीहरूका चरणमा भरोसासहित घोप्टो पर्छन्। तर, बाबा वा गुरु भनाउँदाहरूको नियत...
कुनै समय चर्चामा रहेर सेलाएको देउराली ब्यान्ड अहिले संगीतकर्ममा फर्किएको छ। ब्यान्डलाई 'कमब्याक' गराउन २०६३ सालमा 'निरन्तरता' एल्बम निकाले पनि यो ब्यान्ड जुर्मुराउन सकेको थिएन। एल्बमको नाम 'निरन्तरता' भए पनि...
कसरी राख्ने प्रस्ताव?
'म तिमीलाई माया गर्छु' भन्ने वाक्य सुन्दा जति रमाइलो लाग्छ, कसैलाई पहिलो पटक भन्नुपर्योअ भने त्यति नै सकसमा परिन्छ। पटक–पटक प्रयास गरे पनि धेरैले आफ्ना मनका कुरा भन्न सक्दैनन्। मनका...
सुमिनाका पर्पल सपना
शनिवार सुमिना पुगेकी थिई, एनसेलको पर्पल मेलामा। कान्तिपुरको हब दरबारमार्गमा भएको त्यो सडक मेलामा उसकै उमेरका थुप्रै केटीहरू काखमा बच्चा च्यापेर आएका थिए। तिनीहरू भीडमा घुस्रिँदै र घस्रँदै स्टेजको छेउछाउमा...
बाबु बिते, आमा अर्कैसँग गइन्। त्यसपछि धनकुटाको हिलेमा आफन्तसँग बस्थिन् रीमा। नाताले सानीआमा पर्नेको होटलमा भाँडा माझ्थिन्। एकदिन सानीआमाले राम्रो होटलमा काम लगाइदिने भन्दै धरान ल्याइन्। हिलेको गाडीमा धरान आएपछि...
'एउटै गल्तीले करिअर डुब्न सक्छ'
नेपाली टेलिभिजनका नियमित दर्शकले पार्वती राईको अनुहार एकैदिन धेरैपल्ट दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्छ। किनभने, लोकगीतसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले अभिनय गरेका भिडियोहरू हतपत छुट्दैनन्। चार वर्षयता लोकदोहोरी गीतमा नृत्य गरिरहेकी उनले हालसम्म तीन सय...
देश दौडाहामा 'जिन्दगी रक्स'
फिल्म 'जिन्दगी रक्स' का कलाकार फिल्मको प्रचार गर्दै देशदौडाहामा निक्लेका छन्। फिल्म प्रचार गर्न कलाकारको टोली पोखरा आइपुगेको छ। यो यात्रा अझै केही दिन चल्नेछ।